नेपाल नचिन्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको अन्तराष्ट्रिय मिडियामा चर्चाः नेपाल हैन 'निप्पल' अनि भारतमा पर्छ रे !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेपाल नचिन्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको अन्तराष्ट्रिय मिडियामा चर्चाः नेपाल हैन 'निप्पल' अनि भारतमा पर्छ रे !
काठमाडौं । भेनेजुयला प्रकरणमा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको ठ्याक्कै विपरित अडानमा उभियो नेपाल। अमेरिकाले नेपालको अडान आफू प्रतिकूल भएको मन पराएन। त्यसको असर नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास र अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासमा प्रष्टै देखियो।
भेनेजुयला प्रकरणमा अमेरिकाले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो। नेपाल सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिबाट चिढिएको अमेरिकालाई सरकारले दिएको जवाफले थप चिढ्याउने काम गर्यो। सरकारको धारणा पनि प्रचण्डकै विज्ञप्ति अनुकुलको आयो। यतिबेला नेपाल र अमेरिकाबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपन बढेको छ, जसरी अहिले राजधानीको मौसम छ।
यहीबीचमा अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरूमा आएका समाचारहरूले नेपाल-अमेरिकाको चर्चा झनै चुल्याउने काम गर्यो। त्यो के हो भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई नेपालबारे केही थाहा नै रहेनछ। ट्रम्पले नेपाललाई भारतकै अधीनमा रहेको रूपमा बुझेका रहेछन्। अर्को हास्यास्पद कुरा ट्रम्पले नेपालको उच्चारण पनि गलत (निप्पल) गरेछन्।
ट्रम्पको नेपाल बुझाइबारे अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम सिएनएन टिभीले राम्रै चर्चा गरेको छ (माथि) ।
अर्को समाचार माध्यम टाइम्सको समाचार विवरणमा उल्लेख छ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सल्लाहकारसँग जिज्ञासा राखेका रहेछन्- 'के नेपाल भारतमा पर्छ ?'
ट्रम्पको यस्तो जिज्ञासा त्यतिबेला आएको हो, जतिबेला उनका सल्लाहकारले दक्षिण एशियाको बारेमा ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। एसियाको नक्शा देखाउँदै गर्दा भारतसँग जोडिएको देश नेपालबारे ट्रम्पले जिज्ञासा राखेका टाइम्सको समाचारमा उल्लेख छ। ट्रम्पले भुटानलाई पनि 'भारतकै भूभागमा पर्छ?' भनेर सोधेका थिए।
नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको जानकारी सल्लाहकारले दिएका थिए। त्यसपछि पनि ट्रम्पको जिज्ञासा शान्त भएन। उनले फेरी सोधेका थिए- 'के नेपाल कुनै बेला भारतको अधीनमा थियो ?'
ट्रम्पले नेपाल र भुटानको नाम गलत उच्चारण गरेका सिएनएनको भिडियोमा उल्लेख छ। ट्रम्पले नेपाललाई 'निप्पल' र भुटानलाई 'बटन' उच्चारण गरेका थिए।
नेपाल अमेरिका सम्बन्ध चिसिएको बेला ट्रम्पको यो समाचारले चर्चा पाएको छ।
स्मरणीय कुरा के छ भने ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण पछि नेपाल-अमेरिकाबीच सम्बन्ध थप सुदृढ हुन लागेको चर्चा गरिएको थियो। लामो समय पछि अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण हुन लागेको भन्दै सम्बन्ध थप मजबुत हुने समाचारहरू आएका थिए।
केही महिना पहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका भ्रमण पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको अमेरिका भ्रमणको स्मरण यहाँहरूलाई पनि ताजै होला। यदि छैन भने अमेरिका हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो अङ्ग्रेजी सम्बोधनले त्यो याद दिलाउने छ। एकपटक पुनः प्रस्तुत छ यो भिडियोः